SERASERA : Hitsangana ny sendikan’ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny SMGM | Madatopinfo
SERASERA : Hitsangana ny sendikan’ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny SMGM
(Sary : Hilda Ravelonahina, anisan’ny atidoha mikarakara ny fananganana ny sendika) “SMGM” . Io no anaran’ny Sendikan’ny mpanao gazety eto Madagasikara. Tonga nivory namolavola ny sata mifehy io Sendika io ny mpikirakira vaovao vitsivitsy, ny marainan’ny 21 Septambra teo, tao Antsakaviro Antsahabe, foiben’ny FES na Friedrich-Ebert-Stiftung. Tanjona ny hivoahany amin’ny fomba ofisialy tsy ho ela miaraka amin’ny fitsipika anaty sy ny birao mpitantana ary ny fanomezan-dalàna araka ny lalàna manankery avy amin’ny Fanjakana. Anisan’ny efa nivoitra ihany fa misokatra amin’ny mpanao gazety mandray sy nandray karama ary ireo tsy miankina ny fikambanana. Noheverina fa manampy ny mpanao gazety haneho ny heviny izy ity.
«Ny fihaonantsika androany dia fanohizana ny fananganana ny sendikan’ny mpanao gazety manerana an’i Madagasikara. Eo ampametrahana ny fototra tahaka ny fitsipika anaty amin’izao fotoana izao. Matetika mantsy amin’ny fivorian’ny mpanao gazety fa toa tsy zarizary ny asa sy ny fepetra. Ohatra amin’izany ny karama izay kely nefa ny asa betsaka sady sarotra. Niainga tamin’izay tsapa izay, efa nisy ny atrik’asa ny 12 Septambra farany teo. Fantatra fa azo ihoarana io ka mitaky ezaka fa tsy lahatra akory sanatria. Mba hahatongavana amin’izay tanjona izay no hananganana ny fifanarahana iombonana na “convention collective” izay afaka mamaritra mazava ny amin’izany vahaolana rehetra izany. Mpikambana telo lehibe no tokony ho voakasika ao sy hifampiraharaha amin’izany : ny Fanjakana, ny mpampiasa ary ny mpanao gazety.” Hoy i Hilda Ravelonahina, mpikarakara ny fananganana ny sendika.
Tsahivina moa fa fahefana faha-efatra ny Fitaovan-tserasera. Tsy vitsy anefa ireo mpanao gazety no mitaraina fa mavesatra sy mihatra aman’aina ny asa nefa kely karama. Ka maro amin’ireo mpanao gazety vita fianarana no mampivady asa na manao ny asan’ny serasera fotsiny fa tsy ny asa fanaovangazety. Tokony hahazo tambin-karama raha mihoatra ny ora 40 izay iasany isan-kerinandro izy ireo, raha ny lalana velona no jerena. Izay indrindra no antony hananganana : “ convention collective” ifampifehezana mba hifehy ny mpiasa rehetra ihany koa, izay itakiana zo fa tsy latsa-danja amin’izany koa ny adidy. Toy izany koa ny fitsipika mazava mikasika ny fitaovana raha sanatria ka very sy ny fiarovana amin’ny asa. Ankoatra ny fitsipika dia ho avy tsy ela ihany koa ny fananganana ny birao. Marihina moa fa tsy misy loko politika hatrany ny resaka sendika fa ny tombotsoan’ny tsirairay mpikambana no tandrovana toy ny anakandriamaso.
ANDRO IRAISAMPIRENENA HO AN’NY YOGA: An’arivony ireo nandray anjara teny Ankatso
FITAFI MADAGASIKARA: Nandrombaka ny amboaran’ny Fahaleovantena 2019
ZANDARMARIAM-PIRENENA: Hanamafy ny fifankatiavana amin’ny alalan’ny lalao ara-panatanjahantena
GATE UNIVERSITY AMBOHIDRATRIMO: Mpianatra 137 mianadahy nahazo mari-pahaizana
ORANGE ESPORT EXPERIENCE: Hihazo an’i Ejipta i Ryan nandresy tamin’ny lalao PES 2019
UCM AMBATOROKA: Misokatra ho an’ireo manana “Master” ny Sekoly Doctorale